Maxkamada Kismaayo oo maanta xukun dil ah ku riday nin hore dil ugu geystay nin 60-jir ah - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamada Kismaayo oo maanta xukun dil ah ku riday nin hore dil ugu geystay nin 60-jir ah
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in maxkamad ku taala magaaladaasi ay maanta dil toogasho ah ku xukuntay nin ku eedeysan inuu halkaasi dil ugu geystay nin kale.
Ninkaan dilka lagu xukumay oo magaciisa lagu sheegay Cumar Faarax Ismaaciil ayaa la sheegay in lagu soo eedeeyay in 4-ta bishii hore ee November uu magaalada Kismaayo ku dilay marxuun C/raxmaan Maxamuud Carab.
Eedeysanaha Cumar Faarax Ismaaciil ayaa dilka uu u geystay marxuum C/raxmaan Maxamuud Carab u adeegsaday tooreey, waxayna maanta maxkamada magaalada Kismaayo soo gaba-gabeeysay dacwadii lagu soo oogay ninkaasi gacan ku dhiiglaha ah.
Marxuumka la dilay C/raxmaan Maxamuud Carab iyo ninka dilka geystay Cumar Faarax Ismaaciil ayaa la sheegayaa inay ka wada tirsanaayeen ergadii soo dooran laheyd mid ka mid ah xildhibaanadii Aqalka hoose ee lagu dooranayay magaalada Kismaayo.
Cumar Faarax Ismaaciil oo ay da’diisu tahay 67-sano jir ayaa maxkamada magaalada Kismaayo horteeda ka qirtay inuu dilay C/raxmaan Maxamuud Carab oo isna da’diisa lagu sheegay 60-sano jir.
Waxaa xukunka maanta lagu riday Cumar Faarax Ismaaciil goobjoog ka ahaa ehelka labada dhinac, iyadoona fulinta xukunkaasi uu dhawaan dhici doonno.